Buundada Yavuz Sultan Selim oo ka socota magaalada Beijing ilaa London | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulYavuz Sultan Selim Bridge oo ka yimid Beijing ilaa London
10 / 03 / 2016 34 Istanbul, tareenka, GUUD, hyperlinks, TURKEY
Yavuz Sultan Selim Bridge oo ka socda Beijing ilaa London: Tareen ka soo baxaya Shiinaha ayaa ka gudbaya Caspiya, Anatolia oo ka yimid Marmaray iyo Balkanka Yurub. 3 dhowr sano. waxaa lagu dhex dari doonaa gawaarida reer Yurub iyadoo la adeegsanayo buundada ...
Wasiirka Gaadiidka Binali Yildirim, oo ah xarun tareenka Baku-Tbilisi-Kars ah dhamaadka sanadka laga bilaabo Shiinaha ilaa Yurub tareen ayaa la oran karaa. Isagoo cadeynaya in khadka tareenku uu noqon doono suurtagalnimada tareenka iyo ka dibna gaadiidka rakaabka marka hore, Wasiir Yildirim ayaa sheegay, iyada oo la dhamaystirayo tareenkan, xiriir toos ah oo u dhexeeya Yurub iyo Bariga Fogaanta ah ayaa lagu hirgeliyaa Caucasus. Mashruucan oo keliya ma aha Azerbaijan ee, Turkiga, ma mashruuc Georgia ee. Mashruucani waa mashruuc wadajir ah oo ka socda Bariga Dhexe, Bartamaha Aasiya iyo Yurub. Markaan dhamaynayno giraantan, 'Silk Road' ayaan dhammaystirnayn. Waxaa jirey dib-u-dhac aan loo baahnayn oo mashruuc ah. Waxaan qaadnay taxadar. Dhamaadka 2016, waxaan ku socon doonaa tareenada halkan
Wasaaradda Gaadiidka, Xiriirka Maraakiibta iyo Isgaarsiinta Yaasiin, oo ka hadashay furitaanka Shirwaynaha Golaha Wakiilada ee Wadamada Iskaashatooyinka Turkiga, ayaa sheegay in tareenka ka soo kici doona Shiinaha uu ka qaadi karo Caspiyaanka iyo Anatooliya Marmaray ilaa Balkaan iyo Galbeedka Europe. waxa kale oo uu sheegay in wax la mid ah ay ka dhici doonaan Yavuz Sultan Selim Bridge.
BRIDGE waxay faa'iido u leedahay
Wasiirka Binali Yildirim, 3. soru Ma jiraan wax la yaab leh ama yaab leh oo ku saabsan, waxa uu waydiiyay su'aasha qiimaha isgoyska ee buundada, kaas oo la filayo inuu 3 u yahay baabuurta iyo 15 ee baabuurta culus. Adeeg kasta wuxuu leeyahay qiimo. Haddii aad haysato lacag, waxaad ka dhigi kartaa miisaaniyadda, waad kabtaa. Haddii aadan samayn, waxaad ku samayn kartaa iskaashi la leh qaybta ganacsiga gaarka ah, si dhaqsi ah ayaa loo dhaqaajin doonaa sida ugu dhakhsaha badan. Mashruucaani waa buundada waqtiga rikoodhka aduunka. Iyada oo la adeegsanaayo buundada, 3 ayaa keydisa TL-ga qashinka wakhtigeeda iyo isticmaalka shidaalka ee Istanbul. Iyadoo maskaxda lagu hayo, 2 ayaa bilaash u noqon doona sanadka dhexdiisa. Qiimaha ugu qaalisan waa adeeg la'aan ".
gaadiidka xamuulka qaada leh tareenka